USA oo taageertay howlaha dib-u-heshiista ee ay waddo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya – Radio Daljir
Seteembar 21, 2013 3:50 b 0
Washington, September 21, 2013 – Xog-hayaha arrimaha debeda ee Maraykanka Jonh Kerry ayaa dowladda Soomaaliya ku amaanay dib-u-heshiisiinta iyo dhaq dhaqaaqa dowladnimo ee Soomaaliya u soo baxaya, xili uu la kulmay madaxweynaha dalka Xasan sheikh Maxamuud oo Washintong jooga.
Mr. Kerry waxaa uu sheegay in dowladda uu horkoco Xasan sheikh Maxamuud ay guul ka gaartay dhinacyo badan oo Soomaaliya u baahnayd in laga dhiso, isagoo isla arrintaas ka hadlayey ayuu sheegay in USA ay Soomaaliya ka caawin doonto dhinacyada Amaanka, dhaqaalaha iyo horumarinta dimuqraadiyada.
Xog-hayaha arrimaha debeda ee USA waxaa uu ugu baaqay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud in uu ku dadaalo sidii howlaha dib-u-heshiisiinta iyo wada-shaqaynta ula qeybsan lahaa maamulada Puntland iyo Soomaaliland si loo helo awood buuxda oo ay Soomaaliya yeelato.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa isna dowladda Maraykanka ku amaanay dadaalka ay ugu jirto in Soomaaliya ay dowladd ka hana-qaado, mudane Xasan sheikh Maxamuud intaas kadib taageeray qorshaha USA ee dalka Syria.
Kulanka madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud iyo xog-hayaha arrimaha debeda ee Maraykanka Mr. Kerry ayaa imanaysa xili madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku jooga dalka Maraykanka, isagoo dhowaan booqan doona New York oo uu ka furmayo shirka Qaramada Midoobey.